ငွေလိမ် မှု နဲ့ ထောင်ကျ နေတဲ့ မင်းသမီး မေသန်းနု လွတ်မြောက် လာပါပြီ – Let Pan Daily
မင်းသမီး မေသန်းနု ယနေ့ ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာ ပါပြီ…. ဝမ်းသာစရာ ပါဗျာ…..
တရားလို ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် က ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။ မေသန်းနုကို ပုဒ်မ၂၇၅/၁၇ ၊ ပုဒ်မ ၄၂၀ တို့နဲ့ ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့ တရားလိုဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီများရှင် မေသန်းနု ကိုတော့ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်က ရာဇသတ်ကြီးမှုအမှတ် ၂၇၅/၁၇၊ပုဒ်မ ၄၂၀ ထပ်မံ တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက သင်္ဃန်းကျွန်းတရားရုံးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အကယ်ဒမီ မေသန်းနုကို နောက်တိုးတရားခံ အဖြစ် ထပ်မံတရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကို တရားလိုဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်က မီဒီယာ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
“လှည်းတန်းက အိမ်ကို သိန်း၂၅၀၀ နဲ့ ပေါင်ပေး လိုက်ရတာပါ။ ကိုသူခက်နဲ့ မေသန်းနုနဲ့ ကျွန်မဆီလာတယ်။ ပြီးတော့ မဆင့်က အကူအညီတောင်းလို့ ကျွန်မက လုပ်ပေးလိုက်တာ။ တရားခံက ပြေးသွားတာ မဟုတ်ဘူး ပထမက တရားစွဲတော့ သူမပါဘူး။ မပါတော့ မပေးတဲ့အတွက် ကျွန်မက နောက်တိုး စွဲလိုက်တာပါ။ နောက်တိုး တရားစွဲဆိုမှုကို တိုင်းကနေပြီးတော့ ပြန်ကျတာပါ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
တရားခံဘက်ကေဒ်ါစန်းစန်းမြင့်ကို ပိုက်ဆံတွေ လာပေးမယ်လို့ ပြောဆိုတာတွေရှိပေမယ့် အခုချိန်ထိ မပေးသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတဲ့ ငွေကြေးတွေ ပြန်ရမယ် ဆိုရင်တော့ မေသန်းနုကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုကိစ္စကို ကျေအေးပေးမယ့်အကြောင်း သူက ပြောပါတယ်။
“ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့၊ နစ်နာသွားတဲ့အရာတွေ ပြန်ရရင် ကျွန်မ ကျေအေးပေး မှာပေါ့။ ကျွန်မကို အပြင်မှာ ပိုက်ဆံရပြီလို့ ထင်နေကြတာ။ ပေးမယ် ပြောပြီးတော့ မပေးပါဘူး။ ဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေ ဘာမှ မရတော့ တရားရုံးကို ဦးတိုက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မကို သနားပြီးတော့ အမှန်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် တရားသူကြီးတွေ၊ ရှေ့နေတွေ ကိုလည်း မျှော်လင့်တယ်။ အားလည်း အားကိုးပါတယ်” ဆိုပြီးတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့က ရုံးချိန်းမှာ ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။
အကယ်ဒမီများရှင် သရုပ်ဆောင် မေသန်းနုဟာ ငွေကျပ် သိန်း ၁၂၀၀ လိမ်လည် မှု ပုဒ်မ ၄၂၀ နဲ့ ရန်ကင်းတရားရုံးက ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂ရက်နေ့ကအလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်ကျခံစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ရာဇသတ်ကြီးမှုအမှတ် ၂၇၅/၁၇၊ပုဒ်မ ၄၂၀ နဲ့ နောက်တိုး အမှုအဖြစ် သင်္ဃန်းကျွန်းတရားရုံးမှာ ထပ်မံ တရား ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ မေသန်းနုဟာ
၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက အဆိုပါအမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားရင်ဆိုင် ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် ကို တစ်လ ၅ သိန်း ပြန်ဆပ်ဖို့ တရားရုံးက အမိန့်ချခဲ့ပေမယ့် ၂ လ ပေးခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်က အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
မေသန်းနုရဲ့ အမှု ကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင် နဲ့ သားဖြစ်သူ မင်းသန့်မောင်မောင် တို့က ဖြေရှင်းပေးသွားမယ်လို့လည်း စင်ရော်မောင်မောင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်။ မေသန်းနုဟာ နိုင်ငံကျော် ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားနဲ့ TV ကြော်ငြာ တွေလည်း အများကြီးရိုက်ကူးထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာသက်တမ်းကလည်း နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ လက်ရှိ အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက် အနုပညာလောကသားတွေ နဲ့ အတူ ပရိသတ်တွေကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ် လို့နေကြပါတယ်။
ငှလေိမျ မှု နဲ့ ထောငျကြ နတေဲ့ မငျးသမီး မသေနျးနု လှတျမွောကျ လာပါပွီ
မငျးသမီး မသေနျးနု ယနေ့ ထောငျမှ လှတျမွောကျလာ ပါပွီ…. ဝမျးသာစရာ ပါဗြာ…..
တရားလို ဒျေါစနျးစနျးမွငျ့ က ပွောပွခဲ့ ပါတယျ။ မသေနျးနုကို ပုဒျမ၂၇၅/၁၇ ၊ ပုဒျမ ၄၂၀ တို့နဲ့ ထပျမံတရားစှဲဆိုလိုကျတယျလို့ တရားလိုဖွဈသူ ဒျေါစနျးစနျးမွငျ့က ပွောပါတယျ။
သရုပျဆောငျ အကယျဒမီမြားရှငျ မသေနျးနု ကိုတော့ ဒျေါစနျးစနျးမွငျ့က ရာဇသတျကွီးမှုအမှတျ ၂၇၅/၁၇၊ပုဒျမ ၄၂၀ ထပျမံ တရားစှဲဆိုထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ အဆိုပါအမှုနဲ့ပတျသကျပွီး ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ရုံးခြိနျးကို ဖဖေျောဝါရီလ ၁၈ ရကျနေ့ နလေ့ယျပိုငျးက သင်ျဃနျးကြှနျးတရားရုံးမှာ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
အကယျဒမီ မသေနျးနုကို နောကျတိုးတရားခံ အဖွဈ ထပျမံတရားစှဲဆိုခဲ့တဲ့အကွောငျးကို တရားလိုဖွဈသူ ဒျေါစနျးစနျးမွငျ့က မီဒီယာ အငျတာဗြူးတှမှော ဖွဆေိုခဲ့ပါတယျ။
“လှညျးတနျးက အိမျကို သိနျး၂၅၀၀ နဲ့ ပေါငျပေး လိုကျရတာပါ။ ကိုသူခကျနဲ့ မသေနျးနုနဲ့ ကြှနျမဆီလာတယျ။ ပွီးတော့ မဆငျ့က အကူအညီတောငျးလို့ ကြှနျမက လုပျပေးလိုကျတာ။ တရားခံက ပွေးသှားတာ မဟုတျဘူး ပထမက တရားစှဲတော့ သူမပါဘူး။ မပါတော့ မပေးတဲ့အတှကျ ကြှနျမက နောကျတိုး စှဲလိုကျတာပါ။ နောကျတိုး တရားစှဲဆိုမှုကို တိုငျးကနပွေီးတော့ ပွနျကတြာပါ” လို့ သူက ဆိုပါတယျ။
တရားခံဘကျကဒျေါစနျးစနျးမွငျ့ကို ပိုကျဆံတှေ လာပေးမယျလို့ ပွောဆိုတာတှရှေိပမေယျ့ အခုခြိနျထိ မပေးသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတဲ့ ငှကွေေးတှေ ပွနျရမယျ ဆိုရငျတော့ မသေနျးနုကို တရားစှဲဆိုထားတဲ့ အမှုကိစ်စကို ကအြေေးပေးမယျ့အကွောငျး သူက ပွောပါတယျ။
“ ဆုံးရှုံးသှားတဲ့၊ နဈနာသှားတဲ့အရာတှေ ပွနျရရငျ ကြှနျမ ကအြေေးပေး မှာပေါ့။ ကြှနျမကို အပွငျမှာ ပိုကျဆံရပွီလို့ ထငျနကွေတာ။ ပေးမယျ ပွောပွီးတော့ မပေးပါဘူး။ ဆုံးရှုံးတဲ့အရာတှေ ဘာမှ မရတော့ တရားရုံးကို ဦးတိုကျခဲ့တယျ။ ကြှနျမကို သနားပွီးတော့ အမှနျအတိုငျး ဆောငျရှကျပေးမယျ့ တရားသူကွီးတှေ၊ ရှနေ့တှေေ ကိုလညျး မြှျောလငျ့တယျ။ အားလညျး အားကိုးပါတယျ” ဆိုပွီးတော့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၈ ရကျနကေ့ ရုံးခြိနျးမှာ ဖွဆေိုခဲ့တာပါ။
အကယျဒမီမြားရှငျ သရုပျဆောငျ မသေနျးနုဟာ ငှကေပျြ သိနျး ၁၂၀၀ လိမျလညျ မှု ပုဒျမ ၄၂၀ နဲ့ ရနျကငျးတရားရုံးက ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၂ရကျနကေ့အလုပျနှငျ့ ထောငျဒဏျ တဈနှဈကခြံစရေနျ အမိနျ့ခမြှတျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ ရာဇသတျကွီးမှုအမှတျ ၂၇၅/၁၇၊ပုဒျမ ၄၂၀ နဲ့ နောကျတိုး အမှုအဖွဈ သင်ျဃနျးကြှနျးတရားရုံးမှာ ထပျမံ တရား ရငျဆိုငျနရေတာဖွဈပါတယျ။ မသေနျးနုဟာ
၂၀၁၆ ခုနှဈကတညျးက အဆိုပါအမှုကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး တရားရငျဆိုငျ ခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒျေါစနျးစနျးမွငျ့ ကို တဈလ ၅ သိနျး ပွနျဆပျဖို့ တရားရုံးက အမိနျ့ခခြဲ့ပမေယျ့ ၂ လ ပေးခဲ့တယျလို့ ဒျေါစနျးစနျးမွငျ့က အငျတာဗြူးမှာ ဖွဆေိုခဲ့ဖူးပါတယျ။
မသေနျးနုရဲ့ အမှု ကိစ်စ နဲ့ပတျသကျပွီး ခငျပှနျးဟောငျးဖွဈသူ ဒါရိုကျတာ စငျရျောမောငျမောငျ နဲ့ သားဖွဈသူ မငျးသနျ့မောငျမောငျ တို့က ဖွရှေငျးပေးသှားမယျလို့လညျး စငျရျောမောငျမောငျရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားခဲ့ဖူးပါတယျ။ မသေနျးနုဟာ နိုငျငံကြျော ဝါရငျ့သရုပျဆောငျ တဈဦးပါ။ ရုပျရှငျဇာတျကား၊ ဗီဒီယိုဇာတျကားနဲ့ TV ကွျောငွာ တှလေညျး အမြားကွီးရိုကျကူးထားသူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အနုပညာသကျတမျးကလညျး နှဈပေါငျး ၃၀ ကြျောလာခဲ့ပါပွီ။ လကျရှိ အမှုရငျဆိုငျနရေတဲ့အတှကျ အနုပညာလောကသားတှေ နဲ့ အတူ ပရိသတျတှကေလညျး စိတျမကောငျးဖွဈ လို့နကွေပါတယျ။
ပရိတ်သတ် တွေ ရင်ထဲ မှာ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ် မသွားဘဲစွဲထင် ကျန်ရစ်နေရတဲ့ တချိန်က အကယ်ဒမီပိုင်ရှင် “ဒွေး” (Video)
မိမိုကျလှနျးနတေဲ့ ရငျခုနျခငျြစရာ ပုံတှေ ကို တငျပေးလိုကျတဲ့ ခငျအငျကွငျးကြျော